Warlọ ọrụ Dewar - China Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ngwa ahịa
Ọdịdị nke ite mmiri ahụ dị n'ime ya na mkpo mpụta nke Dewar ka a na-eji igwe anaghị agba nchara, a na-ejikwa igwe anaghị agba nchara rụọ ọrụ nke ime tankị iji meziwanye ike ma belata nfucha ọkụ. Enwere akwa mkpuchi mkpuchi dị n'etiti tank dị n'ime na mpụta mpụta. Multi-oyi akwa kwes mkpuchi ihe na akwa agụụ hụ na mmiri mmiri nchekwa oge. A na-edozi vaporizer n'ime shei iji gbanwee mmiri mmiri cryogenic n'ime gas, na s ...
Ọdịdị nke ite Dewar A na-eme ka tank dị n'ime ya na mpụta nke Dewar site na igwe anaghị ata nchara, a na-eji igwe anaghị agba nchara mee ka sistem na-akwado ya, iji meziwanye ike ma belata nfucha ọkụ. Enwere akwa mkpuchi mkpuchi dị n'etiti tank dị n'ime na mpụta mpụta. Multi-oyi akwa kwes mkpuchi ihe na akwa agụụ hụ na mmiri mmiri nchekwa oge. A na-edozi vaporizer n'ime shei iji gbanwee mmiri mmiri cryogenic n'ime gas, na wuru-na su ...
Ọdịdị nke ite Dewar A na-eme ka tank dị n'ime ya na mpụta nke Dewar site na igwe anaghị ata nchara, a na-eji igwe anaghị agba nchara mee ka sistem na-akwado ya, iji meziwanye ike ma belata nfucha ọkụ. Enwere akwa mkpuchi mkpuchi dị n'etiti tank dị n'ime na mpụta mpụta. Multi-oyi akwa kwes mkpuchi ihe na akwa agụụ hụ na mmiri mmiri nchekwa oge. A na-edozi vaporizer n'ime shei iji gbanwee mmiri mmiri cryogenic n'ime gas, na s ...
Ọdịdị nke ite Dewar A na-eme ka tank dị n'ime ya na mpụta nke Dewar site na igwe anaghị ata nchara, a na-eji igwe anaghị agba nchara mee ka sistem na-akwado ya, iji meziwanye ike ma belata nfucha ọkụ. Enwere akwa mkpuchi mkpuchi dị n'etiti tank dị n'ime na mpụta mpụta. Multi-oyi akwa kwes mkpuchi ihe na akwa agụụ hụ na mmiri mmiri nchekwa oge. A na-ahazi vaporizer n'ime shei iji gbanwee mmiri mmiri cryogenic n'ime gas, na-ewu ya ...